Tababare caan ah oo xilkiisii saaka cadceedu u soo bixin (Qubanayaal Sports) – SBC
Tababare caan ah oo xilkiisii saaka cadceedu u soo bixin (Qubanayaal Sports)
Posted by editor on June 14, 2012 Comments
Harry Redknapp oo ahaa tababarihii kooxda Tottenham ayeysan saaka cadceedu u soo bixin xilkiisii shaqo ka dib markii maamulka sare ee kooxdaasi ay ku dhawaaqeen in xilkii laga qaaday, isla markaana ay soo afjarantey 3 sano oo uu kooxdaasi hogaanka u hayay.
Warbixin lagu soo daabacay bogga Internet-ka ee kooxda ayaa si rasmi ah loogu sheegay in maamulku kooxdu ay go’aansadeen in ay soo afjaraan maamulkii Harry Redknapp ee Tottenham isla markaana heshiiskiisa sanadkii ku kacayay 5-ta milyan ee doolar uu soo dhamaaday.
Tababaraha Everton David Moyes & Tababaraha Wigan Athletic Roberto Martinez ayaa ugu murqo waa weyn ragga la filayo inay buuxiyaan booska uu baneeyey Redknapp oo 65 sano jir ah kaasi oo laba maalmood ka hor sheegay inaan qorshaha ugu jirin in uu xilka iska casilo.
Arimaha keenay in uu shaqada isaga tago Harry Redknapp waxaa lagu sheegay markii loo diidey in loo kordhiyo heshiiskiisa sanadka ay ka dhiman tahay, isagoo taasi badalkeedii doortey in uu shaqada baneeyo.
Maalinimadii shaley Gudoomiyaha Daniel Levy wadahadal uu la yeeshay Harry Redknapp ayaa noqon waayey miro dhal iyadoo taasi keentey in halkaasi uu ku soo dhamaado waayihii tababaranimada kooxda Tottenham Spurs ee ka dhisan waqooyiga magaalada London.
Arimaha ugu waa weyn ee xilkiisa uu ku waayey tababare Harry Redknapp ayaa waxaa ugu wacan ka dib markii uu lumiyey fursadihii ugu muhiimsanaa kooxda ee ahaa in ay xajisato kaalinta 3-aad oo ay bishii January ee sanadkan ku haysatey 13 dhibcood oo ay kaga sareysay kooxda Arsenal ee ay dariska yihiin ee uu kala dhaxeeyo xifaaltanka dhanka kubada cagta.
Kulankii bishii February 26-keedii ka dhacay guriga Arsenal ayay Tottenham ku hormartey 2 gool hase yeeshee 5 gool ayaa loogu badalay, waxaana kulankaasi ka hor Arsenal laga sareeyey 13 dhibcood laakiin 10 kulan oo Tottenham aanay badin ayaa keenay in kulankii ugu dambeeyey Premier League-ga ay Arsenal ku qabtey kaalinta sadexaad ayna si toos ah ugu soo baxdey Champions League-ga.
Inkastoo Tottenmah ay ku dhameystey Premier League-ga kaalinta afaraad ayna u furneyd in ay kaga qayb gasho Champions League-ga is reeb reeb hadana fursadaasi waxaa daaqada kala baxdey Chelsea oo ay isku wadan ka dhisan yihin markii ay qaadatey Koobkii, iyadoo sharciga Champions League-ga uu dhigayo in England ay ka socdaan afar kooxood sidaasina ay ku galayso Tottenham koobka Europe League-ga.
Harry Redknapp Tottenham taariikh weyn ayuu ku leeyahay sanadkii 2010-kii wuxu kooxda markii ugu horeysay abid uu u horseeday ka qayb galka Champions League-ga.
Arimaha kale ee keenay in shaqada uu ku waayo Harry Redknapp ayaa waxaa ka mid ah ka gadaal markii uu si ba’an ugu hanqal taagay qabashada tababaranimada xulka qaranka Ingiriiska arintaasi oo intii lagu mashquulsanaa hoos u dhac iyo kalsooni daro qabsatey kooxda keentey in dhulka laga jiido kulamadii ugu dambeeyey xili ciyaareedkii dhamaad ee Premier League-ga.
Levy told the website: “Go’aankan ma ahan mid aniga iyo maamulka sare ee kooxda ay ku qaateen si fudud” ayuu yiri Gudoomiyaha Tottenham Daniel Levy oo sharaxaad ka bixinayey sida ay ugu adkeyd in shaqada laga eryo Redknapp.
“Wuxuu yimid kooxda xili qibradiisa & magacaabistiisa si rasmi ah loogu baahnaa, Harry mar kasta waa lagu soo dhameyn doonaa Lane (White Hart Lane) garoonka kooxda”.
Docda kale tababaraha xilka laga qaaday oo isaguna hadley ayaa sheegay in uu ku qanacsanaa hawshii uu ka qabtey mudadii uu maamulayey Hot Spurs wuxuuna yiri “Waxaan u riyaaqsanahay afartii sano ee aan la joogay Spurs aad ayaana ugu faanayaa waxqabadkeygii”.
“Aad ayaan ugu xumahay inaan ka tago kooxda, laakiin waxaan u hambalyeynayaa, ciyaarta, kooxda, shaqaalaha iyo taageerayaasha taageeradoodii la yaabka laheyd ee waqtigeyga” ayuu hadalkisia raaciyey Redknapp’.
Chelsea oo heshiis 2 sano ah ku tibaanaysa tababarihii taariikhdeeda ugu weyn horseeday
Kooxda Chelsea ayaa heshiis laba sano ah oo lagu macneeyey tijaabo waxay gacanta u galisay tababare Roberto Di Matteo oo ah tababarihii isagoo xilka si ku meel gaar ah u haya ku hogaamiyey kooxdaasi guushii ugu weyned taariikhdeeda oo aheyd in markii ugu horeysay ay ku guuleysato koobka Champions league-ga, isagoo isla bishaasi qaaday koobka FA Cup ee ah tartan Sports ee dunida loo tartamo kan ugu faca weyn.
Qaar ka mid ah quburada ku xeesha dheer arimaha Sports-ka ayaa sheegay in sababaha xili hore loogu magacaabi waayey Di Matteo xilka tababaranimada si rasmi ah ay ugu wacan tahay iya
Di Matteo oo u dhashay Talyaaniga wuxuu horey uga mid ahaa ciyaartoydii soo martey Chelsea isagoo ahaa ninkii dhaliyey goolkii Chelsea ay ku qaaday koobkeedii ugu horeeyey ee FA Cup ee la keeno garoonka Stamford Bridge.
Isagoo la hadlayey Tv-ga Chelsea wuxuu sheegay in uu ku faraxsan yahay in si rasmi ah loogu magacaabo tababaraha naadiga koowaad ee kooxda & maamulaha kooxda.
Laakiin walaac badan ayaa laga qabaa sida xilkaasi uu ugu sii nagaan karo ninkan taariikhda dhaxalka ah Chelsea u horseeday mudo gaaban isagoo waliba ah Ku meel gaar, maadama lagu yaqaan mulyineerka Chelsea iska leh nin aan dulqaad badan u yeelan guuldarada tababarayaasha, isla markaana si deg deg ah shaqada uga erya.